Soo dejisan Audible 2.3.1 – Vessoft
Soo dejisan Audible
Maqli karo – software ah inaad kala soo baxdo iyo dhagaysan buugaag cod online. Software ayaa u saamaxaaya in ay baadhaan buugaagta qaybiyey hadalyo iyo qaybaha kala duwan ee maktabad weyn oo online. Maqli kuu ogolaanayaa inaad buugaag ku daro bookmark, is beddel u dhexeeya qaababka akhriska iyo dhegaysiga, qabsato xawaaraha loo maqli karo, isticmaal hab hurdo iwm maqli karo siinayaa users kaararkooda aqoonsi liibaan wayn dhagaysiga si ay buugaag cod ah oo bixiya macluumaad ku saabsan dhacdooyinka kala duwan ee la xiriira ee Qorayaasha soo xulay. Sidoo kale la maqli kuu ogolaanayaa inaad reserved oggeysiisyada, playback ama u baahan user ka.
Maktabadda A waaweyn ee buugaagta codka ah
Hababka akhriska iyo dhegaysiga
Habaysaa xawaaraha playback
Warbixin ku saabsan dhacdooyinka la xiriira qorayaasha buugaagta
Kartida in ay is dhaafsadaan buugaag cod ah
Audible Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Skype 6.2.0.17000
العربية, English, Українська, Français... AppLock 2.16.3